Maka: i-imeyili ephendulayo » Martech Zone
Maka: i-imeyili ephendulayo
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Angiqiniseki ukuthi kukhona okunye okukhungathekisayo kunokuhlela i-imeyili nokuqinisekisa ukuthi iyasebenza noma konke okuhlukile kuphathwa kuwo wonke amaklayenti e-imeyili. Imboni idinga ngempela ukuba nezinga lokusebenza kwe-imeyili njengoba nje ikwenzile ngeziphequluli. Uma uvula noma iyiphi i-imeyili edizayinwe kahle, ephendulayo ebukeka kahle kuzo zonke iziphequluli uzothola ukulandelana kwama-hacks we-hodgepodge ukuze kusebenze futhi kubukeke kahle ngangokunokwenzeka. Futhi noma kunjalo uzoba
Ungakuthethelela kanjani ukwakhiwa kwe-imeyili okuphendulayo nokuthi ungaluthola kuphi usizo!
NgoLwesihlanu, January 9, 2015 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Kuyethusa impela kepha abantu abaningi basebenzisa i-smartphone yabo ukufunda i-imeyili kunokushaya izingcingo (faka ukubhuqa mayelana nokuxhumeka lapha). Ukuthengwa kwezinhlobo zezingcingo ezindala kwehle ngo-17% unyaka nonyaka kanti osomabhizinisi abengeziwe abangama-180% basebenzisa i-smartphone yabo ukubuka kuqala, ukuhlunga nokufunda i-imeyili kunakwiminyaka embalwa eyedlule. Inkinga, nokho, ukuthi izinhlelo zokusebenza ze-imeyili azithuthukanga ngokushesha njengeziphequluli zewebhu. Sisabambekile
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Njengoba besifuna ukwenza ngcono ukuzibandakanya kwethu, into yokuqala esiyenzile ukusebenzisa izibonisi ze-imeyili eziphendulayo sisebenzisa ipulatifomu yethu, i-CircuPress, ukusabalalisa okuqukethwe (Bhalisa nsuku zonke noma ngeviki). Ukushintshwa kwezibalo kwakungamangalisa neze. Sithumela i-imeyili yethu yamasonto onke kubabhalisi abangaphezu kwama-70,000 ngoMsombuluko futhi ama-analytics ethu asikhombisa ukuthi lokho kuyisiphukuphuku sezimoto zethu ngaphezu kwanoma iyiphi enye indlela noma iphromoshini. Akuzange kwenzeke kuze kube
Izindlela Eziyisi-4 Zokuthatha Ukuya Kwamasu Wokumaketha Weselula Ohlakaniphile
NgoLwesibili, Agasti 5, 2014 NgoLwesine, ngoMashi 3, 2016 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu Iselula, iselula, iselula… ngabe ukhathele yiyo okwamanje? Ngicabanga ukuthi sisebenza ngamasu eselula nengxenye yamakhasimende ethu njengamanje - kusuka ekusebenziseni izifanekiso ze-imeyili zeselula, ukuhlanganisa izingqikithi eziphendulayo, ukwakha izinhlelo zokusebenza zeselula. Eqinisweni, ngikholelwa ukuthi amabhizinisi abheka ngobuqotho ubukhona bawo bewebhu emuva ngoba ukuxhumana okuningi nemikhiqizo manje sekuqala ngedivayisi ephathekayo - kungaba nge-imeyili, kwezenhlalo, noma ngewebhusayithi yabo. Abakhangisi beSavvy
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Angiqiniseki kakhulu ukuthi zonke izibalo zokumaketha ze-imeyili lapha zibalulekile ekumaketheni kwakho kwe-imeyili, kepha ezimbalwa zazo zigqama kimi: Imali ekhangisa nge-imeyili ngokumangalisayo iphansi futhi ayisetshenziswa kakhulu. Ngiyamangala njalo kubhulogi lethu ukuthi isikhangiso sikanhlokweni siyathengisa njalo… kepha akekho noyedwa othengile ukukhangisa encwadini yethu yezindaba yansuku zonke neyamasonto efinyelela kwababhalisile abangaphezu kwama-75,000 masonto onke. Ukwamukelwa Kwe-imeyili kuphezulu, nge
1 2 Okulandelayo →